ह्विस्कीका प्रकार (२)-उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
व्हिस्कीका प्रकार (२)
1. एकल माल्ट व्हिस्की
कुन व्हिस्की एकल डिस्टिलरीबाट सुरु हुन्छ, यसलाई सधैं स्कच हाईल्याण्ड व्हिस्कीको क्लासिक प्रतिनिधिको रूपमा मानिन्छ। कच्चा माल केवल माल्टेड जौ हो, जुन परम्परागत भाँडो डिस्टिलर मार्फत डिस्टिल गरिन्छ। यदि एकल माल्ट व्हिस्की रक्सीलाई धेरै डिस्टिलरी व्हिस्की (ग्रेन व्हिस्की बाहेक) सँग मिसाइन्छ भने, यसलाई मिश्रित व्हिस्की भनिन्छ।
2. अन्न व्हिस्की
अनाज व्हिस्की कच्चा माल मकै, गहुँ र जौ हो (जौ माल्ट आवश्यक छैन)। जसलाई ग्रेन ह्वीस्की प्राप्त गर्नको लागि निरन्तर आसवन अन्य आवश्यक प्रक्रियाहरू गर्न आवश्यक छ। जुन बजारमा बिरलै बोतलमा अलग्गै बेचिन्छ । तर यहाँ "ग्रेन व्हिस्की" लेबल गरिएको केही व्हिस्की पनि छन्। यद्यपि यो सधैं विचार गरिएको छ कि स्वाद एकल माल्ट व्हिस्की भन्दा धेरै कम छ, यो अझै पनि स्वादको लायक छ।
3. मिश्रित व्हिस्की
व्हिस्कीका सबैभन्दा सामान्य प्रकारहरू, 90% स्कच व्हिस्कीहरू यस श्रेणीमा पर्छन्, जस्तै विश्व प्रसिद्ध जोनी वाकर, चिभास र ब्यालेन्टाइन। विशेषताहरू अपेक्षाकृत हल्का छन्, मूल्य महँगो छैन (तर त्यहाँ शीर्ष लक्जरी सामानहरू पनि छन्), र स्वाद सिम्फनी जस्तै सामंजस्यपूर्ण छ। तसर्थ, यो एकल माल्ट व्हिस्की भन्दा प्रवेश स्तर स्वाद को लागी अधिक उपयुक्त छ।
4. के संसारमा अतुलनीय व्हिस्की छ?
एकल माल्ट व्हिस्कीलाई प्रायः व्हिस्की संसारको रोल्स रोयसको रूपमा मानिन्छ। निस्सन्देह, धेरै मानिसहरू सोच्छन् कि यो अन्य व्हिस्कीलाई हराउन पर्याप्त छ जब धेरै विशेषज्ञहरूले अन्धा चाख्छन्, तर तिनीहरू सबैले यो कथनमा खिल्ली उडाए। सबैमा, संसारमा कुनै पनि उत्कृष्ट व्हिस्की छैन। Wई मात्र भन्न सक्छ कि विभिन्न व्हिस्की स्वादहरु को आफ्नै गुणहरु छन्।
अघिल्लो: स्कट्च ह्विस्की
अर्को: विश्व प्रसिद्ध क्षेत्रहरूबाट ती व्हिस्कीहरूको स्वाद कस्तो छ?